Submitted by everlearner on Wed, 06/29/2011 - 17:12
ဒီနေ့ Gmail က မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ အသုံး၀င်တဲ့ Widget အသစ် တစ်ခုက People Widget ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေကုန် အလုပ်ထဲမှာ အီးမေးလ်တွေ အပြန်အလှန်ပို့ရင်း ဒီ Widget လေးကို တော်တော် သတိထားမိပါတယ်။ Gmail မှာ People Widget လေးက အလိုအလျောက် အလုပ်လုပ်နေပြီး၊ အသုံး၀င်တဲ့ Feature လေးတွေကို အခုလို တွေ့ရပါတယ်။
Read more about Gmail's People Widgets
ဘယ်သူ့အတွက်လဲ (You Are not the User)
Submitted by everlearner on Thu, 05/19/2011 - 15:30
"သူများလည်း ငါ့လိုပဲ တွေးမှာပါ" - ဆိုပြီး ယူဆတတ်တဲ့ အကျင့်တစ်ခုက လူအတော်များများမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ ထင်နေသလို မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ပညာရှင်များက ဒီလို တွေးထင်ယူဆမှုကို "တစ်ဖက်သတ် လွဲမှား ယူဆမှု" (False Consensus Bias) လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ အခြားသူတွေက မိမိတွေးထင်သလို - မတွေးတဲ့အခါ သို့မဟုတ် လိုက်မလုပ်တဲ့အခါ - မိမိရဲ့ အတွေးကို ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့ ထိုသူတွေကို အမှတ်တမဲ့ "ကင်ပွန်းတပ်၊ အမည်ပေး" တတ်ကြပါတယ်။ တခါတရံ "ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ" ဆိုတဲ့ အထိ ရောက်ရှိသွားတတ်တဲ့ အဖြစ်မျိုးပါ။
Read more about ဘယ်သူ့အတွက်လဲ (You Are not the User)
အမြန်လမ်းနဲ့အမှန်လမ်း - Fast Way Vs the Right Way
Submitted by everlearner on Sun, 05/15/2011 - 14:06
Developer, Programmer အများစု အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ လုပ်ငန်းအချိန်ဇယားကို အစပိုင်းမှာ ဘယ်လိုပဲ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ထားပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ အလွန်အကျွံ ဖိအားပေးခံရတဲ့ အချိန်နဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေ ကြုံလာရတတ် ပါတယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မှာ -
* အမှန်အတိုင်း လုပ်မလား (Doing it Right)
* အမြန်ပြီးအောင် လုပ်မလား(Doing it Quick)
ဆိုတဲ့ ရွေးစရာ လမ်းတွေ ရှိလာတတ်ပါတယ်။
Read more about အမြန်လမ်းနဲ့အမှန်လမ်း - Fast Way Vs the Right Way
We are Upgrading and Migrating
Submitted by mmshare on Thu, 05/05/2011 - 03:29
We are migrating our site to new server.
At the same time upgrading Drupal content from D6 to D7.
In mean time you will face some inconvenience causes.
We will get back as fast as possible.
Read more about We are Upgrading and Migrating
လောကအလှ အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းမှ အင်တာဗျူး
Submitted by everlearner on Thu, 03/31/2011 - 23:31
မတ်လတစ်လလုံး အံ့သြစရာ ကောင်းလောက်အောင် အလုပ်တွေများနေတဲ့ အတွက် စာမရေးနိုင်လို့ လောကအလှ အွန်လိုင်း မဂ္ဂဇင်းက 17 January 2011 မှာ အင်တာဗျူးခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးကို ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်... အွန်လိုင်းကနေပဲ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီအင်တာဗျူးမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ web experiences, knowledge sharing နဲ့ life style နဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို ပြောဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အင်တာဗျူးခဲ့တဲ့ "မဟနစံ" ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Read more about လောကအလှ အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းမှ အင်တာဗျူး
Submitted by everlearner on Thu, 01/06/2011 - 08:01
We are very familiar with Zawgyi too long. But now is the time to move, use 100% Unicode fonts. It is not very easy for every one, to convert all our - documents, files, web pages, blog posts and database - writing in Zawgyi to 100% Unicode character fonts (Myanmar3, Padauk, Parabaik etc). In this article, I will share my experience and conversion processes. This article is divided into two parts. One for normal users, whose without knowledge of - database and server management. The other one is for expert users, whose have database and server management experience.
Read more about Zawgyi To Unicode Conversions Tips, Tricks and Risks
Submitted by everlearner on Sat, 12/11/2010 - 14:21
အင်တာနက်စာမျက်နှာ တစ်ခုအတွင်းမှာ နောက်ထပ် အခြားစာမျက်နှာတစ်ခုထဲက အကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြချင်တယ်ဆိုရင် iframe တွေကို သုံးရပါတယ်။ Iframe ကို သုံးထားတဲ့ လူသိအများဆုံး ဥပမာ တစ်ခုကို ပြောပြပါဆိုရင်တော့ ယခုအချိန်မှာ ခေတ်အစားဆုံးနဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက် အတော်များများမှာ အသုံးပြုနေကြတဲ့ Facebook Like, Facebook Comment စတဲ့ Facebook Social Plugins များပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို လျင်မြန်စေဖို့ လိုအပ်တဲ့ အကြောင်းများထဲမှာ iframe တွေကို သုံးတတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။
Read more about Minimizing the Number of iframes Usage to Speed Up our Websites